Indlela ukukhetha highchair: iseluleko esisebenzayo
Uma une encane endlini lapho, khona-ke uyoba maduze ucabange indlela ukukhetha highchair. Kodwa kule ndaba kufanele yasithatha ngokungathí sina, ngoba inquma induduzo impilo ingane yakho. Kufanele kuqashelwe ukuthi isimiso esejwayelekile usebenzisa ifenisha sinjalo efanayo, kungakhathaliseki imodeli.
Ngaphambi kokukhetha highchair, kumele ayejwayele izidingo ebaluleke kakhulu ifenisha zezingane. Okokuqala, kuzomele kube njengoba esitebeleni ngangokunokwenzeka. Kufanele angawi, ngisho noma ingane ke spin. Ngo esitolo, zama poshatatsya esihlalweni. Uma umi ngokuqinile phezu imilenze ke ukuphepha umntwana akakwazi esabe. Yiqiniso, uma unezinye ikhishi elincane, akufanele ukhethe kakhulu ifenisha i izingane jikelele sika.
An kakhulu samuntu intando ngesitulo, eyanqunywa imilenze anamekwe amasondo. Kulokhu, it zingasuswa kalula bengonozulane. Amasondo kufanele ifakwe i ukubopha ezengeziwe, okuyinto, uma kunesidingo, uzokwazi uzilungise esimweni esigculisayo khona.
Ngaphambi kokukhetha highchair, kuyancomeka ukuba banake usule. Kufanele abe amabhampa elincane ungayeki ipuleti noma inkomishi ukuna. Ngokwemvelo, lokhu kusho usule kufanele wenziwe impahla ephephile futhi zemvelo. Futhi kufanele kube lula ukususa, ugeze. Kungaba kuhle uma phezulu etafuleni angasuswa ngokuphelele, ukuze ingane ibe ithebula Joint. esihlalweni isihlalo kufanele kube kahle padded, hhayi ubanzi kakhulu noma lincane kakhulu.
Okuyisici esibalulekile ifenisha esinjalo nebhande lesihlalo semoto. Iqiniso lokuthi ingane ingase ngaso sonke isikhathi ahlale kahle, futhi kungenzeka ukuthi nje ingena. Ngaphezu kwalokho, kungcono sinake Upholstery we ifenisha. Kusemqoka ukuthi it is wageza kahle.
Ngaphambi kokukhetha highchair, ahlole ngokucophelela yona umonakalo, igawula noma izingxenye sikhubazekile. Zonke iziqobosho kumelwe thembeke ukulungisa isakhiwo. Hlola ukuthi ukuphakama ziyahlukahluka. Kwezinye onobuhle kungenzeka ukulungisa backrest. Uma uvame uye ukuvakashela noma ubunjalo, khetha imodeli ukuthi kungenziwa eligoqiwe.
Ngokuqondene impahla sokwakha isakhiwo, ukhuni plastic abakhiqizi manje usebenzisa. Ngezinye izikhathi ungase ukuthole nensimbi izihlalo. Kunoma ikuphi, kufanele ukhethe inketho nephephile. Khumbula, akufanele ngemininingwane engadingekile mayelana ukuthi kid kungaba silimala.
Kumele wathi mayelana nomklamo ukwakhiwa. Kufanele kube egqamile futhi ezimibalabala, ukuze ingane bathandile imibala kanye amaphetheni.
Ngokuqondene onobuhle ethandwa kakhulu, omunye ungacabanga highchair Inglesina uZuma. It is iqinisekisa ngokugcwele ukuphepha, kuba ukhululekile kakhulu ingane futhi has a design enhle. Enye mkhulu highchair Happy Baby. Kuyinto into Amatebhe, iqinisekisa ngokugcwele ukuphepha ingane yakho, kanye nomklamo esiphawuleka ukunikeza kakhulu isimo umntwana ngezikhathi zokudla.
Isihlalo Wamathambo kumfundi: ukhethe best
Ukukhetha ekamelweni efulethini ifenisha
Loft embhedeni embhedeni ngaphansi. Ifenisha izingane
Agnes Martin Lyugai: Biography nemisebenzi
Umdlalo Sky Ayikho Elomuntu - indlela yokuthuthukisa FPS futhi asuse izingodo?
Sifuna umbala iso elihle kakhulu
Monika Beluchchi ngaphandle izimonyo futhi "Photoshop". Umlingisikazi Monica Bellucci
Izimpawu abanale nkinga
Indlela yokwenza passport ingane eneminyaka engaphansi kwengu-14 ubudala? Imibhalo sokubhalisa ipasipoti ngomntwana
Indlela ukugoqa a shawarma ekhaya